Chii chinonzi Bitcoin Future - Nezvedu
Iyo Bitcoin Future Software chirongwa chinogadzirwa pachishandiswa mapurogiramu akanyanya kunaka mukutengesa kwenyika. Isu tinozvirumbidza kuti tinoshanda zvakanyanya sezvo software yedu iri pamberi pemisika nemasekondi. Izvi zvakawedzera kusimudzira kune software uye zvave kutiita isu takazvipira zvakanyanya kugadzirira kune zvinodikanwa zvemitezo yedu.
Isu tinopa vanofarira mari mukana wekuita purofiti kubva mukukwira kweBitcoin kwakaitika nguva pfupi yadarika. Iyo Bitcoin Future Software yagadzira zviuru zvevanhu mamirionea miriyoni nekungobaya chete uye maminetsi mashoma papuratifomu zuva nezuva.
Nhengo dzedu dzinonakidzwa nezororo kutenderera pasirese, ivo nekungobaya mashoma pane yavo laptop uye maminetsi mashoma ekushanda zuva rega rega.
Yedu yekutengesa app inopa 99.4% nhanho yekururamisa iyo pasina imwe app kana chikuva chakakwanisa kurova. Vatengi vedu vanoziva izvi izvi ndosaka vachivimba nesu nemari yavo. Isu tinovabatsira zvakapetwa uye nekatatu mari yavo yekudyara nemari isingatendeseke purofiti.
Yedu software iri nyore kushandisa, uye haudi chero yakakosha yekudzidziswa usati wafamba nenzira yakatenderedza. Inokurumidza, inoshanda, uye inogutsa zvikuru. Zviratidzo zvevatengi vedu zvinotitaurira isu; ivo vakashandisa chikuva ichi kutengesa musika uye vakawana zvinobatsira. Ichi chiratidzo kuratidza vatengesi vedu kugona kwedu uye nekuti ino system inoshanda.
Sisitimu yedu irikuita kuti vanhu vapfume, uye iwe unogona kuve unotevera mamioneya. Isu takazivikanwa neUS Trading Association, ndosaka takapihwa se # 1 mune yepamhepo yekutengesa software chikamu. Kwaive kukudzwa kwakadai kugamuchira mubairo uyu; isu tingadai tisina kuzviita pasina kuvimba nevatengesi vedu, izvi zvatiita isu takazvipira kukupa iwe masevhisi akanakisa aunogona kukumbira pasina muripo.
Chikuva chedu chakasununguka zvachose; hatina mhosva dzakavanzika, uye hatikumbire kutumirwa; Mari yese yaunowana uye purofiti ndeyako chete.
Isu tinoziva kuchengetedzeka, isu tinoziva nhamba hombe yevagadziri papuratifomu yedu, uye isu tine basa rekuchengetedza mari yavo, software yedu yakavakirwa pane yakanyanya kodhi yekodhi inochengetedza zvese zviri papuratifomu. Isu tinovimbisa kuti mari yako yakachengeteka uye hauna kana chaunombonetseka nezvacho.
Mapuratifomu edu anoshanda sei.